Dhowr isticmaale ayaa ka cabanaya in tooshkii iPhone X / XS keligiis shidmay | Wararka IPhone
Waa guuldareysasho aan si isku mid ah u saameynaynin dhammaan isticmaaleyaasha isla markaana sida cinwaanka warka si wanaagsan u sharraxayo uu yahay in tooshashka LED-ka ee iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max iyo iPhone XR shaqeysiiyaa si aan kala sooc lahayn iyo si otomaatig ah, iyadoo la adeegsanayo bateriga muuqda ee qalabka.
Tani waa warbixin isticmaale badan laakiin ma ahan mid guud iyo Apple lafteeda ma aysan sameynin qoraal rasmi ah ama wax ku saabsan dhibaatadan. Runtii ikhtiyaarka kaliya ee sababi kara firfircoonaankan adeegsadaha iyo si kama 'ah waxay xiriir la yeelan doontaa daqiiqadda ay jeebka kala soo baxayaan, laakiin uma muuqato inay sidaa tahay.
Sida laga soo xigtay dhexdhexaadinta USA Maanta Waxay u muuqataa in tan lagu soosaaray moodooyinka iPhone X wixii ka dambeeyay iyo moodooyinka cusub ee ay soo saartay Apple bishii Sebtember ee la soo dhaafay sidoo kale waxay yeelan doonaan fashilaad. Waxaan dhihi karaa waxaan la jiray iPhone X tan iyo markii la bilaabay guuldaradan waligey iguma dhicin. Mid ka mid ah xulashooyinka ay soo bandhigeen isticmaaleyaasha dhibaatadan leh ayaa awoodi doona beddel toobiye tooshka ah ee ka muuqda shaashadda, laakiin tani macquul maahan xilligan.
Ma haysaa dhibaatada si otomaatig ah u shaqeynaya tooshka tooshka ee iPhone-kaaga? Hadday saas tahay, way fiicnaan lahayd haddii aad ku wadaagto faallooyinka maxaa yeelay waxay u muuqataa inay tahay dhibaato yar oo unugyada qaar ah ama xitaa dhibaato la xiriirta xannibaadda iyo ku talagal la'aanta astaanta tooshka. Sikastaba ma aha wax saameynaya dhammaan isticmaaleyaasha moodelladan iPhone-ka ah ka fog
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Dhowr isticmaale ayaa ka cawda in tooshkii iPhone X / XS uu isagu iskii u dhaqaajinayo
Sidoo kale marar badan ayey igu dhacday aniga, runti marwalba waan aaminsanahay toobiye kaas oo aanan isticmaalin, horey ayaan u eegay una dhajiyay si aan ugu badalo mid kale oo aan isticmaalo. Waa inay bixiyaan suurtagal
Waxay noqon laheyd mid xiiso leh haddii aad beddeli laheyd toosh iyo ka-gaabin kaamirooyinka, ama awood u laheyd inaad iyaga ka saarto oo shaashadda madhan tahay. Kama xanaaqi lahaa.
Waxaan haystaa iPhone X iyo bilawgii markii aan haystay, waxaan dareemay raadinta Settings-Battery, had iyo jeer waxay i siisaa toosh aad u sarreeya, dhowr jeer oo aan isticmaalo. Waxaan ka shakisanahay inay tahay adeegsi shil ah dhinaceyga.
Muusikada YouTube ayaa hadda la jaan qaadaya kuwa ku hadla Sonos